के हो पल र समीक्षा विवाद ? दुवैले दिए पालैपालो स्पष्टीकरण - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार ११ : ५८
समीक्षा र पलको ‘प्रेम प्रकरण’ बारे चियोचर्चो सुरू भए पनि यो चियागफमै सीमित थियो । यसबारे पूर्ण जानकार कोही थिएनन् तर यकिनका साथ भन्ने पनि कोही थिएनन् । यो विषयमा बोल्न उनीहरू तर्किए पनि अन्ततः बोलेका छन् । एक सातायता चर्चामा रहेका यी दुईको सम्बन्धको विषयमा गसिप र समाचार आउन थालेपछि समीक्षा र पलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो सम्बन्धलाई प्रस्ट्याएका छन् ।
पलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुलाई हुँदै नभएको र नगरिएको आरोप लगाइएको बताएका छन् । ‘काम गर्ने क्रममा व्यक्ति वा समूहसँग नजिक भइन्छ र सांगीतिक सहकार्य समीक्षासँग भएको हो’ पल लेख्छन् ,‘पछिल्लो केही दिनयता आएका खबरले मेरो शुभचिन्तकसँगै परिवारलाई समेत दुस्खी बनाएको छ ।’ समीक्षासँग रहेको मित्रतालाई अन्य नाम नदिन आग्रह गर्दै उनले चरित्र हत्या हुने गरी समाचार नबनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
केही समययता पल र समीक्षाको प्रेमको चर्चा फिल्मनगरीमा छ । पछिल्लो समय पलको म्युजिक भिडियोमा व्यस्तता अत्यधिक छ । तर, यो चर्चा चलेयता उनले इभेन्टमा सहभागिता जनाउन छाडेका छन् । उनलाई भिडियोमा अभिनय गराएका एक निर्देशकले पलले इभेन्टमा आफू नआउने बताउने गरेको खुलाए । ‘पलजी सार्वजनिक कार्यक्रममा भने नआउने भन्नु हुन्छ’ उनले भने । यी दुईको बीचमा सहकार्यबाहेक अन्य केही नरहेको अवस्थामा मिडियासँग साक्षात्कार गर्न किन डराइरहेका छन् ? त्यो त यिनैले जानून् ।